Bilaogera Kiswahili: Atao inona fifidianana raha efa fantatra ela mialoha sahady izay ho lany? sy vaovao hafa… · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2019 3:17 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny 27 Oktobra 2005)
Manohy manoratra momba ny fifidianana filoham-pirenena sy parlemantera amin'ny faran'ny volana ireo bilaogera Tanzaniana amin'ny fiteny Kiswahili. Mwandani nahita taratasy misokatra misy toro-hevitra nalefa any amin'ny “filoha manaraka”, Jakaya Kikwete.
Na dia mbola tsy nandatsa-bato hifidy filoham-pirenena vaovao aza ireo Tanzaniana, dia ny fandresen'ny antoko eo amin'ny fitondrana no vinavina mialoha. Tsy takatr'i Miruko ny dikan'ny fifidianana raha fantatra ela mialoha fifidianana ny vokatra. Mifidy ny filoham-pireneny sy ny parlemantera isaky ny dimy taona i Tanzania .
Kazonta mihevitra fa hanihany ny ataon'ny Birao Misoroka amin'ny Kolikoly (PCB amin'ny teny Anglisy) manatontosa seminera hiadiana amin'ny fanao kolikoly amin'ny fampielezan-kevi-pifidianana andro vitsy mialoha ny fifidianana. Tsy fantany hoe nahoana ny PCB no niandry ela vao nanao izany.
Satria nanjary iray amin'ireo olana ara-tsosialy lehibe indrindra atrehan'ny tanora ao Tanzania ny tsy fisian'ny asa, dia mitatitra momba ny fikambanana iray mampiasa tranonkala amin'ny fiteny roa (Kiswahili sy Anglisy) i Gaphiz mba hamahana ity olana ity.
Funguajicho, mpianatra Tanzaniana any Oganda, miresaka ny politika Ogandey, indrindra fa ny fiverenan'ny kandidan'ny mpanohitra malaza, Dr.Kiiza Besigye, avy any an-tsesitany any Afrika Atsimo
Harakati mamoaka lahatsoratra lava momba ny loza aterak'ireo mpanakanto Tanzaniana ” “Bongo Flava” miala amin'ny famantarana ara-kolotsaina azy amin'ny alàlan'ny fakana tahaka ny zava-drehetra avy any Amerika. “Raha mihira sy mitafy tahaka ny 50 Cent ianao, nahoana aho no tokony hihaino anao fa tsy 50 Cent ?,” hoy izy.
Ngurumo manontany izay tompon'ny sainam-pirenena Tanzaniana rehefa te-hanasazy ny Chama cha Demokrasia na Maendeleo (antokon'ny demaokrasia sy ny fampandrosoana) noho ny fampiasana ny lokon'ny sainam-pirenena tamin'ny fampielezan-keviny ny Vaomieram-Pirenena Misahana ny Fifidianana ao Tanzania.
Issa Michuzi namoaka ny sary trano avo be kambana roa ao Dar Es Salaam sy ny sariny mandihy miaraka amin'ireo Maasai ao Arusha, Tanzania.